मोटोपन कसरी घटाउने ? पेट कसरी घटाउने ? हेर्नुहोस यस्तो छ डा. आशिष त्रिपाठीको सुझाव (भिडियो सहीत) – mero sathi tv
On २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार १७:११
मोटोपन अहिले नेपालको शहरी क्षेत्रका मानिसहरुको आम समस्या हो । खास गरी पेट कसरी घटाउने भन्ने बारे आम मानिसहरुको चिन्ता देखिन्छ । पेट बढेपछी बिभिन्न शारीरीक समस्या हुने मात्र होइन, मानिस हेर्दा पनि कुरुप देखिन्छ ।
मोटोपना मानिसको सुन्दरता संग जोडिएको बिषय पनि हो । त्यसैले पनि आम मानिसहरुमा पेट लाग्ने र शरीरको तौल बढ्ने बिषय ठुलो चिन्ताको बिषय हुने गरेको छ । शरीरको तौल कसरी घटाउने त ? बढेको पेट कसरी घटाउन सकिन्छ ? यस बिषयमा पेट छाती तथा मुटुरोग बिशेषज्ञ डा. आशिष त्रिपाठीले निकै उपयोगी सुझाव दिएका छन ।
मोटोपन कसरी घटाउने देखी दैनिक खानपानलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने र खास गरी मोटोपना संग सिधा सम्बन्ध राख्ने खाने तेल कुन र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बिषयमा डा. त्रिपाठीले दिएको यो सुझाव तपाईको लागी निकै उपयोगी हुनेछ । डा. त्रिपाठीको सुझाव तलको भिडियोमा हेर्नुहोस ः
पुर्व पतिको चलचित्र ‘मंगलम’ हेर्न पुगेकी रेखाले हलबाट प्रतिकृया दिदै भनिन्, ‘छविको छोरा र म संगै हुर्केको’ (भिडियोसहित)